Apple weputara Apple TV Ad ohuru akpọrọ "The Kiss" | Esi m mac
Apple weputara Apple TV Ad ọhụụ akpọrọ "The Kiss"
Ọzọkwa, Apple chọrọ atụmatụ ọhụrụ ndị batara na ọgbọ nke anọ Apple TV ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ hụ ka ha wee nwee ike ịtụgharị ndị na-eso ụzọ nke ngwaahịa nke apụl a tara. na nke a na nke ọhụrụ Apple TV. Nke a bụ mgbasa ozi ọhụụ ha akpọrọ "Kiss", "nsusu ọnụ ahụ."
Azụmaahịa otu nkeji na-ewere ọnọdụ n'ime ụlọ mgbakwasa nke ndị omee abụọ na-eji ụda olu Siri na Ọgbọ nke anọ Apple TV nke rutere Apple Music na nyocha na ngwaọrụ n'onwe ya.
O doro anya na ọgbọ nke anọ Apple TV ka malitere nnọọ nrịgo ya na ọ bụ na dị ka Tim Cook kwuru na Keynote na Machị 21, ọdịnihu nke telivishọn gafere site na ngwa na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ iji nweta Apple TV na usoro tvOS.
Na mgbasa ozi ahụ anyị kwuru, anyị nwere ike ịhụ ndị omee ama ama abụọ, nwata ahụ bụ Nikolaj Coster-Waldau, omee nke usoro Egwuregwu ocheezema Alison brie, onye na-eme ihe nkiri na Community o Mad Men. Ha abụọ na-ekwu okwu n'ime ụlọ mgbakwasa, gbasara ihe yiri ka ọ bụ ihe nkiri ọhụụ nke ihe nkiri ma ọ bụ usoro, ụzọ kachasị mma iji nweta ọnọdụ isusu ọnụ nke ha ga-eche ihu.
Iji mee nke a, Alison na-eme ka Nikolaj hụ iberibe ihe nkiri nke ọ gwara Siri ka ọ kpọọ ya Egwuregwu nke ocheeze. Agbanyeghị, Nikolaj echeghị na ọ bụ ụzọ kachasị mma ma rịọ Siri ka o si egwu Jeremaya egwu di na Apple Music. Obi abụọ adịghị ya na nzọ ọhụrụ nke Apple mere ka ọgbọ nke anọ Apple TV na-aga n'ihu na egbugbere ọnụ onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Apple weputara Apple TV Ad ọhụụ akpọrọ "The Kiss"